Rallye – Tompondaka 2018: mifanakaiky ny isan’i Rivo sy i Tahina | NewsMada
Rallye – Tompondaka 2018: mifanakaiky ny isan’i Rivo sy i Tahina
Mpanamory anisan’ny hiady ny lohany amin’ny dingana farany ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara 2018, ny fanamoriana fiarakodia Randrianarivony Rivo sy Razafinjoelina Tahiana. Mifanakaiky ny isan’izy ireo, rehefa natao ny tambatr’isa nandritra izay dingana 6 nifanesy izay.
Mitàna ny lohalaharana hatrany i Rivo izay manana isa 292,40 hatreto, taorian’ny dingana 6 izay natrehina. Anisan’ny tena nampitombo be ity isany ity ilay fifaninanana farany teo tany Moramanga “Rallye International de Madagascar” izay nahazoany isa 100. Manaraka azy ary tsy mifanalavitra ao amin’ny laharana faharoa Razafinjoelina Tahina, manana isa 273,20. Ity mpanamory ity izay nifanenjika sy niady mafy tamin’Andrianarivony Rivo, nandritra ny Rim farany teo. Fahatelo kosa Rahamefy Teddy, manana isa 220,40. Nahazo ny amboara teo amin’ny sokajy “Jeunes” ity farany tamin’ny dingana faha-6 ny fiadiana ny tompondaka 2018 teo.
Mbola tsy afaka mamaritra izay mety ho tompondaka nasionaly 2018, ny fanamoriana fiarakodia anefa ireo isan’ny telo voalohany ireo. Ny farany rahateo vao tena misy ventiny ary ny isa rahateo tsy dia mifanalavitra firy, indrindra eo amin’i Rivo sy i Tahina.
Raha tsiahivina, hifarana rahampitso ny fisoratana anarana amin’ity dingana farany amin’ny Rallye, mitondra ny anarana hoe “Tour de Tanà” ity. Fifaninanana izay hamaritra ny ho tompondakan’i Madagasikara 2018.